चम्किने बेला सुस्तायो बजार — Arthatantra.com
Arthatantra.com > पत्रपत्रिका > चम्किने बेला सुस्तायो बजार
काठमाडौं । बडादसैंको पहिलो दिन (घटस्थापना) मा मुलुकका प्रमुख व्यापारिक केन्द्रमा चहलपहल हुन्थ्यो।
सपिङ मल तथा बजारमा व्यापारीलाई सामान बेच्न भ्याइनभ्याइ, किनबेच गर्नेको ठेलमठेल देखिन्थ्यो। व्यापारीले राम्रै आम्दानी गर्थे। खर्च गर्नेले पनि मन फुकाउँथे। यसले अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउँथ्यो।
तर यो वर्ष घटस्थापनाको दिन शनिबार बजारमा खासै चहलपहल देखिएन। व्यापारी ग्राहक आउने छाँटकाँट नदेखेपछि निराश छन्। कोभिड–१९ महामारीका कारण अहिले दसैं लक्षित बजार सुस्ताएको छ।
धेरैको रोजगारी गुमेको छ। आम्दानी खुम्चिएको छ। कोभिड सर्ने त्रास पनि छ । कोरोनाको कारण राजधानीबाट अधिकांश आफ्नो थातथलो (जन्म गाउँ) जाने मुडमा छैनन्। सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भएकाले टीका लगाउन आफन्तकोमा जाने परिस्थिति छैन। त्यसैले किनमेल प्राथमिकतामा छैन। यसले दसैं अर्थतन्त्रलाई खुम्चाएको छ।
आम्दानीका स्रोत खुम्चिएपछि त्यसको प्रभाव बजारमा देखिएको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
२०७७ कार्तिक २ गते ०९:२४ मा प्रकाशित
सिटिजन्स बैंकले तिनाउ मिसनलाई मर्ज गर्ने, स्वाप रेसियो कति ?
एकै दिन ४२ आतङ्ककारी यसरी मारिए
दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा आउन सुरु (हेर्नुहोस् अपडेट) !
कृषि क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न बागमती सरकारको ‘एग्री ट्रान्सपोर्ट कल सेन्टर’